Warshadda Farshaxanka & Naqshadeynta Shiinaha iyo alaableyda | Donghua
Thermoplasticsku waa shey dhexdhexaad u ah muujinta iyo ikhtiraaca. Xulashadayada tayo sare leh, xaashi acrylic badan leh iyo alaabada muraayadda balaastigga ah waxay ka caawineysaa naqshadeeyayaasha inay u keenaan himilooyinkooda hal abuurka ah nolosha. Waxaan bixinnaa midabyo kala duwan, dhumuc, qaabab, xajmiga xaashiyaha iyo qaabeynta polymer si loo buuxiyo baahiyaha farshaxan la'aanta iyo codsiyada naqshadeynta. Waxaan ku siineynaa xulasho ballaaran naqshadaha loo yaqaan 'acrylic naqshadeynta & wax soosaarka tafaariiqleyda & ganacsiyada iyo qurxinta guryaha oo leh xulashooyin badan oo dalab ah - laga bilaabo dhumucda illaa qaababka iyo midabada illaa dhammaadka.
Laga soo bilaabo ilaalinta bandhigyada illaa sawirada, acrylic waa xulashada la doorbiday ee codsiyada dhalaalka. Bandhigyada matxafka iyo waxyaalaha kale ee la soo bandhigo ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya sifooyinka shaandhada UV ee akriliyada Kaliya maahan acrylic inuu ilaaliyo farshaxanka - waa farshaxan. Acrylic waa dhexdhexaad ku habboon hal-abuurka.
DHUA Acrylics waa qaab casri ah oo casri ah oo nabad, wada noolaansho iyo taabasho jacayl ah loogu keeno gurigaaga ama qurxinta xafiiskaaga. Qurxinta acrylic derbigu waa mid aan sun ahayn, aan friib lahayn, ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga daxalka. Waxay ku habboon tahay qurxinta derbiyada gudaha ama daaqadaha qolka, qolka jiifka, ama dukaanka. Waxyeello uma geysaneyso deegaanka iyo caafimaadka.
Daabacaadda loo yaqaan 'Acrylic' waa hab casri ah oo lagu soo bandhigo sawir, farshaxan, calaamado, farriimo suuqgeyn ah ama sawir kale oo ku dhejisan daabacaadda darbiga cajiibka ah. Waxay u beddeleysaa sawirkaaga sawir gacmeed qurux badan markaad daabacdo sawirkaaga ama farshaxanka wanaagsan si toos ah plexiglass acrylic. DHUA acrylic waa badeecadaha xulashada calaamadaha been abuurka iyo naqshadeeyayaasha sababo la xiriira cimri dherer, cimilada iyo sahlanaanta heer kulka jirka.
Laga soo bilaabo barta tafaariiqda ee wax iibsiga (POP) ilaa bandhigyada matxafka, DHUA acrylic waa shey ku habboon soo bandhigida iyo soo bandhigida kiisaska / sanduuqyada sababtoo ah tayo sare leh oo loo yaqaan 'acrylic materail' oo lagu soo bandhigo waxyaabo dillaacsan, muuqaal ahaan Saafi ah, qafiif ah, kharash wax ku ool ah, noocyo badan oo fudud. Waxay ka dhigeysaa astaamahaaga iyo sheygaaga inay dhalaalaan.
Acrylic wuxuu leeyahay muuqaal muraayad ah oo siinaya qaab u gaar ah. Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic sheet' waa sheyga ugu fiican ee ka samaysan miisaska miisaska, khaanadaha iyo sagxadaha kale ee fidsan oo aan la isticmaali karin ama aan la isticmaali karin.
Xaashida looxa cad
Waraaqaha Acrylic Color